Isiokwu a na-elekwasị anya na-agwa gị n'elu 10 FREE na mma QuickTime nkiri editọ. Ha niile bụ ndị dị mfe iji. Ị nwere ike na-eche free dezie gị QuickTime videos.
QuickTime Player bụ a zuru okè video nchịkọta akụkọ ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ mkpa ụfọdụ ndị bụ isi video edezi ọrụ dị ka trimming, n'usoro n'usoro, ma ọ bụ na ijikọta obere vidiyo. Na video trimming atụmatụ, ị nwere ike wepu akụkụ ị na-achọghị ma na-gị chọrọ video akụkụ. Ọzọkwa ị nwere ike ikpokọta 2 ma ọ bụ karịa mkpachị ma jikota ha n'ime otu.
Avidemux bụ na-emeghe-isi iyi QuickTime nkiri nchịkọta akụkọ. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka AVI, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MOV, 3GP iji a dịgasị iche iche nke codecs. Ọ bụ ihe dị mfe na-eji video nchịkọta akụkọ na-esi gị ọnwụ, nzacha na ngbanwe aga-eme rụzuru. Ọzọ oké mma bụ na i nwere ike machiini gị aga-eme iji oru na ọrụ kwụ n'ahịrị.
Jahshaka nwere video na ọdịyo edezi ike nke ọkachamara-larịị software, na-akwado iche iche video formats. Ọ nwere ike ijikwa ezigbo oge 3D compositing na Flash na-aga aga (ruo 32k matte n'ígwé); OpenGL dabeere agba; na a ederede modul. E nwekwara modul maka na agba mgbazi, Keying, na nsuso, na n'usoro nke media nkwado.
iMovie akwado MOV, 3GP, MPEG, MP4, M4V na MOD dị ka ọsọ ọsọ formats. Dị ka Windows Movie Onye kere, ị nwere ike iji ya resize QuickTime video, bugharia QuickTime video, akuku QuickTime video, ma ọ bụ tinye ikwu n'ụzọ gị video, wdg O na-enyekwa dị iche iche ụgbọala na-adọkpụ ndebiri ka ị ngwa ngwa ike fun trailers si gị footages. Mgbe edezi a mere, unu kpọmkwem bulite gị video ka Facebook, YouTube, Vimeo, na CNN iReport.
HyperEngine-AV bụ ewu ewu n'etiti ọtụtụ dijitalụ na-emepụta fim na ndị ọkachamara. Ị nwere ike iji nke a free QuickTime nkiri nchịkọta akụkọ ike slide na-egosi, ezinụlọ fim ma ọ bụ azụmahịa n'ihu site na ijikọta seamlessly video, photos, ụda na ederede ọnụ. Mmepụta video dị elu DV mma. Ị pụrụ ọbụna itinye ọtụtụ nke video mmetụta hazie QuickTime obere vidiyo.
6. Windows Movie Onye kere (Windows)
Ohere Movie Onye kere anọwo na ahịa ruo ọtụtụ afọ n'ihi na window usoro ka ị mfe dezie QuickTime video. Ị nwere ike iji ya bugharia QuickTime video, resize QuickTime video, ma ọ bụ ubi, mbugharị, tinye aha, ikwu n'ụzọ na ndị ọzọ na mmetụta gị Obere vidiyo. The software nwekwara ike ngwakọta audio faịlụ na video tracks na-emepụta video remixes. The akwado video formats agụnye MOV, WMV, AVI, MP4, M4V, 3GP na ndị ọzọ.
VSDC bụ a free QuickTime video nchịkọta akụkọ, ma ọ anya na-ele dị nnọọ ka a ọkachamara otu. The akwado video formats agụnye MOV, MP4, AVI, MKV, mpg, WMV, FLV na ndị ọzọ. E nwere dị iche nzacha, nsonaazụ ụda, na-eru na nhọrọ ngwaọrụ. Ma ọ nwere ike na-esiri ndị beginners nna niile video edezi ọrụ.
8. Vimeo Video Editor (N'ihi na iPad, iPhone & iPad Touch)
Vimeo bụghị nanị zuru okè nke na-ekiri, ijikwa na chọpụtara videos online. Ọ nwekwara ike ịbụ gị dị ukwuu QuickTime video edezi na ngwá ọrụ gị iPad, iPhone ma ọ bụ iPod Touch. Ị nwere ike weghara ikpokọta, dezie, na resize QuickTime videos, ma ọ bụ tinye ikwu n'ụzọ, utu aha, na mmetụta. Na enwekwukwa Vimeo Video, ị ga-enye ndị enyi gị oké ihe ijuanya.
9. VidTrim (N'ihi na Android ekwentị mkpanaaka na)
Ọ a ghọtara dị ka ndị kasị mma na free QuickTime nkiri nchịkọta akụkọ nke gam akporo ọrụ. Ị nwere ike iji ya resize video, tinye mmetụta ma ọ bụ music gị videos. Ọbụna ọ ga-eji wepụ music si QuickTime fim ma ọ bụ tọghata QuickTime video ka MP4. Dị nnọọ nwere a QuickTime Video nchịkọta akụkọ na gị android ngwaọrụ na-enwe video edezi na-aga!
Magisto bụ a free na mfe iji online QuickTime video nchịkọta akụkọ. E nwere nanị 3 nzọụkwụ na-eme ka a Pro video. Ị nwere ike dị họrọ foto gị ma ọ bụ vidiyo, họrọ a isiokwu nyere wee tinye ọkacha mmasị gị music. Ọzọkwa ngwá ọrụ a awade quickest ụzọ ịkọrọ gị dezie QuickTime video enyi na ndị ezinụlọ.
Get a Professional & Advanced QuickTime Video Editor
Free QuickTime video editọ kwuru n'elu dị nnọọ nye ụfọdụ isi video edezi ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a elu ndị ọzọ nchịkọta akụkọ, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) nwere ike-ezi nhọrọ.
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Windows & Mac)
All kpochapụwo video edezi ọrụ dị ka mkpụbelata, akuku, mbugharị, ịkpụ, gbawara n'etiti na-gụnyere.
Gbanwee ìhè, na-egwu ọsọ, ịgbanwe olu ọdịyo, pitch, ịjụ oyi na / agwụ si mmetụta.
Mee pụrụ iche video mmetụta dị ka tilt-nnofega, na-eche ihu anya, Mozis blur, oyi kpọnwụrụ foto, na ọzọ.
Export maka web, mobile, DVD na integrates na YouTube n'ihi na otu onye-nzọụkwụ bugoo.
Akwado os: OS X 10.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ofụri Esịt dakọtara na Mac OS X 10.11 (El Capitan), Windows 10/8/7 / XP / Vista
1. Mee 80 okike na professionally e nzacha.
2. Họrọ 59 pụtara mgbanwe mmetụta.
3. 19 dị iche iche-ekere òkè customizable ederede mmetụta dị.
4. 13 trendy na pro-na-achọ intros & Ebe e si nweta ndebiri nyere.
5. Large nhọrọ nke nsonaazụ ụda.
6. Mepụta surreal & na-adọrọ mmasị miniatures na Tilt-Mgbanwe Mmetụta.
7. Mee Mozis ka a ghara ịma si video.
Top 10 Best Online Video Editors maka Video edezi Online
Atụ aro DVD Ntụgharị N'ihi arụrụ n'ụlọ Videos
Ụzọ dị mfe iji dọwara Videos si YouTube
Olee otú Record Voice na Ultimate Voice teepu
> Resource> Video> Top 10 Free QuickTime Movie Editors